FANGATAHAN’NY DEPIOTE : Mbola olana iraisan’ny Distrika maro ny rano sy ny lalana ary ny vidin’entana – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:24
Fihaonana voalohany ny omaly ho an'ireo Minisitra vaovao.
Accueil/Politika/FANGATAHAN’NY DEPIOTE : Mbola olana iraisan’ny Distrika maro ny rano sy ny lalana ary ny vidin’entana
Nanomboka omaly 02 desambra ary mitohy anio 03 desambra 2021, eny amin’ny CCI Ivato ny fihaonana eo amin’ny Governemanta sy ny Solombavambahoaka. Fihaonana izay voafaritry ny Lalàmpanorenana ho fampandehanana ny raharaham-pirenena. Nisongadina tamin’ny fandraisam-pitenenan’ireo Depiote rehetra omaly ny olana eo amin’ny sosialim-bahoaka, indrindra eo amin’ny fisitrahana rano, ny lalana, ary ny vidin’entana.
“Ny fomba ampiasain’ny Antenimiera ahafantarany ny asa sahanin’ny
avy amin’ny Governemanta”, hoy ny andininy faha 102 ao amin’ny Lalàmpanorenana.
Nanomboka omaly alakamisy 02, araka izany, ary hitohy anio zoma 03 desambra 2021 ny fametrahan’ny Solombavambahoaka fanontaniana amin’ireo mpikambana anaty Governemanta izay natao teny aminy CCI Ivato. Fihaonana izay nandraisan’ny Solombavambahoaka tsirairay fitenenana mandritra ny dimy minitra avy, raha telo minitra no nahazatra teo aloha. Tamin’ny ankapobeny, niompana betsaka tany amin’ny lafiny sosialim-bahoaka ny olana notanisain’ireo Depiote, indrindra ny sehatry ny rano, ny fotodrafitrasa, ny lalana, ny fanabeazana, ary ny vidim-piainana.
Mila solika ireo fiarabe fanamboaran-dalana
Tsy mifidy intsony na an-tanàn-dehibe na amin’ny kaominina ambanivohitra fa saika mitaraina amin’ny tsy fisitrahana rano fisotro madio avokoa ireo Solombavambahoaka omaly. Isan’izany ny Depioten’Ampanihy izay nanasongadina ny fijalian’ny mponina amin’ny resaka rano, teo koa ny Depioten’Anjozorobe. Tetsy ankilany, ny Solombavambahoakan’i Tsiroanomandidy nilaza fa misy fotodrafitrasa afaka mamatsy rano tsara any an-toerana saingy tsy maharaka izany. Nambarany fa zary lasa amin’ny alina ny mponina no manenjika mivoaka alina maka rano noho izay olana izay. Mitovy amin’izany koa ny sedrain’ny mponin’Antsirananana, araka ny voalazan’ny Depiote avy any an-toerana.
Ankoatra izay, tsy vitsy tamin’ireo Depiote nametraka fanontaniana tamin’ny Governemanta ihany koa no nangataka ny hanamboarana ireo lalana rehetra any ifotony. Ho an’ny Depioten’I Mananjary manokana, nolazainy fa efa tonga any an-toerana ny Engin na ireo fiarabe fanamboaran-dalana avy amin’ny Filoham-pirenena, saingy tsy misy solika hahafahana manodina izany. Ny any amin’ny Distrikan’Analalava kosa indray dia tsy mbola misy resaka mihitsy hatreto ny fanamboarana ny RN31a, raha ny nambaran’ny Depiote avy any an-toerana. Tsy ireo ihany fa maro ireo olom-boafidin’ny Antenimieram-pirenena no nitaraina tamin’ny resaka lalana.
Tsy miparitaka ireo entana nafarana
Ankoatra ireo, nisongadina tamin’ny fandraisam-pitenenan’ny rehetra ihany koa ny resaka vidin’entana. Nahitsy ny Depioten’I Manandriana omaly raha nilaza teo anatrehan’ny Governemanta, fa ireo entana rehetra hafaran’ny Fitondram-panjakana hamahana ny olan’ny vidin’entana eto amintsika, dia tsy misy tonga any amin’ny Distrikan’I Manandriana. Dikany, miakatra izay tsy izy ny vidin’entana any an-toerana. Raha ny voalazan’ity Depiote ity hatrany dia tafakatra 800ariary amin’izao fotoana ny kapoakan’ny vary an-toerana. Tsy izy ihany fa saika nitaraina mahakasika io vidin’entana tsy araka ny tokony ho izy io daholo ireo Depiote marobe. Isan’izany ireo avy any amin’ny Distrika manana voly fanondrana toy ny lavanila. Na izany aza anefa, niaiky ihany koa ny Depiote fa Minisitera isan’ireo mavesatra ny misahana ny varotra sy ny fanjifana, ka midera ireo ezaka rehetra efa nataon’ny Minisitera sy ny Fitondram-panjakana izy ireo.
Marihina ny laharana 01 ka hatramin’ny 75 no nifanatrika tamin’ny Governemanta omaly. Araka ny fandaminana omaly hariva dia tsy nisy ny fandraisam-pitenenan’ireo minisitra omaly fa atambatra androany avokoa ny valim-panontaniana. Hitohy anio indray, araka izany, ity fifanatrehana eo amin’ny roa tonta ity.
PROFESORA ZAFY ALBERT: Nametraka maodelin’ny tena Demokrasia sy ny Fampihavanam-pirenena
FIFIDIANANA LOHOLONA: Tapitra hatreo ny adihevitra momba ny mpifidy vaventy sy ny toetrandro
Familiana ieren-doza : Hizara traikefa amin’ireo mpamily ny teknisianin’ny DGSR